Thomas Tuchel oo dalbanaya in loo keeno Erlling Haaland.
Home Horyaalka Ingiriiska Thomas Tuchel oo dalbanaya in loo keeno Erlling Haaland.
Tababaraha cusub ee kooxda Thomas Tuchel ayaa ka codsaday milkiilaha chelsea Roman Abramovich inuu ku biiro ugaarsiga loogu jiro weeraryahanka reer Norway Haalland kaasoo ay horay indhaha ugu hayeen kooxaha kala ah Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Manchester United iyo Manchester City.
Tuchel wuxuu doonayaa Haaland xilli ciyaareedka soo socda, wargeyska reer Talyaani ee Corriere dello Sport ayaa soo sheegay in Abramovich uu isku dayi doono inuu riyada Jarmalka ka dhigo mid dhab ah, illaa iyo inta ay Chelsea u soo baxeyso Champions League.
Chelsea ayaa si xoogan u maal gelisay xagaagii hore iyadoo bilyaneerka Russia uu maalgaliyay 247 milyan euro oo ah saxiixyo kooxda uu keenay Frank Lampard, laakiin kooxda ayaa hoos uga dhacday hoggaanka Ingriiska.
Hadda, Tuchel waxa wuu doonayaa in kooxda loogu soo daro labo ilaa sedax xidig oo cusub si uu ugu xoojiyo safkiisa Mustaqbalka Haaland wali lama oga laakiin waqtigaan la joogo wuxuu sii wadaa inuu soo jiito kooxo badan isagoo dhaliyay 21 gool 19 kulan oo uu u saftay Dortmund xilli ciyaareedkan.
Previous articleFabinho oo seegi doona labada kulan ee soo socota Liverpool
Next articleMohamed Salah oo wajahaya abaarta goolal la’aaneed ee ugu dheer Kooxda Liverpool